Indlela ukukhetha notebook amaphupho akho
Ukuphila akusho yima, esikhundleni PC yakho ekhaya eze kwamanye amadivayisi. Futhi-notebook. Ziyakwazi besiyoba sikhulu, esindayo, amandla kancane nebhethri. Kodwa netbooks zenzelwe nje ukuhamba, nokugcineka, umculu ukuphathwa inethiwekhi. Ngokwemvelo, ibhethri muhle ngempela. Ngokwesilinganiso, kuthatha 5-7 amahora ukusetshenziswa okuqhubekayo. Nanku umbuzo: "kanjani ukukhetha netbook?" Akukona kunzima kangaka, nje kudingeka wazi ukuthi iyini owufunayo.
Uma impikiswano eyinhloko choice - umsebenzi, kubalulekile ukukhetha hhayi nje netbook, kodwa wangena lapho kukhona okuningi ibhethri amandla khudlwana. Phela, sincike kuyo, singakanani isikhathi ongasichitha emsebenzini ngaphandle kokuphazamiseka ngo yokusesha sokuzivuselela. Khumbula ukuthi abakhiqizi ngokuvamile kancane bahlobise ngokoqobo. 6. kuphela kanjani ukukhetha notebook nge battery ezinhle kuleli bhukwana kungenzeka impilo yebhethri amahora angu-8, kodwa empeleni? Nakani amandla processor. Ukusebenza ngo 2 GHz ivumela idivayisi ukusebenza ngaphandle kwezinkinga amahora 5. Lapho amandla processor ngenhla ukusetshenziswa amandla kuyoba ephakeme. Isibuko kubaluleke kakhulu. Ukuze umsebenzi, kuyatuseka ukuba qapha kusebenziseka kalula. Kodwa isici esasenza netbooks - usayizi encane. Lokhu kusho ukuthi iningi ukuthi ingatholakala - kuba 11 amayintshi. Ukuze ukusebenza izicelo ehhovisi kwanele.
Indlela ukukhetha netbook ukufunda? Kubalulekile ukucabangela ubukhulu, isisindo, amandla ukusetshenziswa kwe-ibhethri, khona okukhiphayo ezahlukene. Ngokwesibonelo, umsebenzi ukhululekile ezihlukahlukene izinhlelo zemfundo, kuyatuseka ukuba okungenani ezintathu nezimbobo-USB, i-HDMI isixhumi, embobeni okukhiphayo. Lona iqoqo ubuncane, okuzokwenza ukusetshenziswa netbook njengoba kulula ngangokunokwenzeka. Inani elikhulu-USB nezimbobo ikuvumela ukuxhuma imishini ezengeziwe ngaphandle kwezinkinga: igundane, iphrinta, disk drive. Iqiniso zokugcina alikho netbooks lula isisindo zedivayisi. Ubuncane balesi siqiwu, ikuvumela ukuba lithwalwe yonke indawo nami, akuthathi isikhala kakhulu, kulula. Qaphela ukuthi kungenzeka ukuba ukuxhuma kunethiwekhi nge-Wi-Fi. Lokhu kuwusizo ezindaweni zomphakathi ngokufinyelela khulula kwi-Inthanethi. Indlela ukukhetha netbook ngo-2013? Bheka ngokucophelela libuyekeza mayelana onobuhle, banake sha noma ukungezwakali kwawo, idrayivu kanzima, hlobo luni lwezindlu. Matte noma isikrini ecwebezelayo futhi iKhabhinethi? Zonke nje ukunambitheka yakho. Matte umzimba zingavumi kakhulu ngoba uthola ezingcolile. A ecwebezelayo othambekele imihuzuko.
Khetha netbook e nemingcele
Kungakhathaliseki ukuthi injongo wena ukuthenga netbook, kudingeka uthembele ezidingweni zabo. Ingabe unentshisekelo izilungiselelo ephakeme kakhulu? Excellent, uholwe kubo. Indlela ukukhetha notebook ne nemingcele oyifunayo? Funda ngokucophelela incazelo zedivayisi, cela uma ungakwazi ukushintsha izakhi (ukwandisa RAM, ukushintsha ikhadi ividiyo, njll). Into kuphela ungakwazi ungakhathazeki - hard drive yakho. Okuningi ngokunembile, ububanzi balo. Manje ayatholakala emakhemisi kwisitoreji semidiya esikhiphekayo ezinobukhulu obuhlukahlukene. Lokhu kuzokuvumela ukuba njalo wonke amafayela ezidingekayo kunoma iyiphi kumadivayisi: netbooks, izinto zokubhalela PC noma monoblock.
Kanjani ukuze uthumele isithombe kusuka laptop ku-TV ngezindlela ezahlukene
Acer Extensa 5220 notebook: i Uhlolojikelele, Ukucaciswa, izibuyekezo abanikazi
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini ultrabook ephathekayo noma ithebhulethi, lowaya kungcono?
-Notebook Asus K53SD: izici futhi izici
Lenovo v580c: umbono eningiliziwe
Intel Core i5 2450M: Ukucaciswa
Literacy umkhankaso: kanjani ukususa gel nail sula ekhaya?
Debit nama-credit - yini leli gama?
Amanzi azothola indlela. IzAga ngamanzi
Kungakhathaliseki isihlahla ebusika ikhula: izici ukuthuthukiswa isitshalo
Indlela yokwenza iluphu emgqeni ngezindlela ezahlukene
Okungalapheki prostatitis webhaktheriya: ukwelashwa, izimbangela, izimpawu kanye ukuxilongwa
Izilwane ezilwaneni ezinomgogodla ezinamehlo: izimpawu, ikakhulukazi izimpawu
Njengoba ababoni ukubona izwe. Kanjani ukubona amakati izwe lethu
Izinhlelo zokwelapha ngolwazi, ukuqaliswa kwazo kanye nentuthuko
Ukufakwa amawindi ku GOST - phakade yesiqinisekiso
Isilinganiselwa grinders for nokwethenjelwa izinga